Singapore crypto sarrifka KuCoin ballaarinaya la maal $ 3M in Seeraar Australia
sarrifka cryptocurrency ku salaysan Singapore KuCoin ayaa lagu calaamadeeyay gashay gudaha Australia leh $3 milyan oo maal-in a sarrifka Seeraar gudaha nidaamsan, awood operator sarrifka Asian galaan suuqa Australiyaanka ah iyada oo diiradda la taaban karo ku-dhamaadka sare, maal-sare.
Seeraar madaxa fulinta Australia ee Rupert Hackett ayaa sheegay in u gaar ah ballaarinta shirkadda ee dagaal beegsan doonaan 30 wadamada ka hor dhamaadka 2020. "Waxaan doonayaa in aan u xaqiijiyo in tani ay tahay mid run ah,"Madaxa fulinta KuCoin Michael Gan ayaa sheegay in maalgashiga shirkadda. "Tani ma aha oo kaliya a go'aan istiraatiiji weyn, laakiin waxay noqon doontaa iskaashi fiican muddo dheer noo si ay u caawiyaan koraan cryptocurrency caalami ah."
Citigroup waa bangiga ugu dambeeyay si ay u bixiyaan xal xabsiga crypto
Citigroup waxa uu abuuray waxa uu ugu yeeray Rasiidka Digital Hantida ama DAR, malaynayo in ay sida ugu toos ah in ay maal-cryptocurrencies iyaga oo aan lahaanshaha, sida ay dad leh aqoon mashruuca. DAR wuxuu ka shaqeeyaa inta badan sida an Rasiidka Depository American, taas oo ku siinaysaa awood u leh inay maalgashadaan kaydka shisheeye in aan ku baayacmushtaray on dhaafsi US maal US.
Dhismaha dhici lahaa cryptocurrencies gudahood gumaysiga sharciyeed ee hadda jira iyo siiyo maal-weyn Wall Street hab halis yar ee maalgashiga fasalka hantida.
SEC hakisay Seeraar ammaanka sarrifka-baayacmushtari
A qalab maalgashiga aadka calaamadeeyey in damcay inuu racfaan US suuqyada dadweynaha maalgashadayaasha raadinaya gaadhista cryptocurrency ayaa la arkin un u dhac. Guddiga Securities and Exchange Maraykanka ayaa soo saaray amar doonaya in ay joojiyaan ganacsiga ee Tracker Seeraar Kan iyo Tracker Mid ka mid ah qoraalada Ceter sarrifka-baayacmushtari, soo saaray XBT Bixiyaha AB, kabista ah Swedish-ku-saleysan ee U.K ah. Shirkadda CoinShares Holdings.
Si rasmiga ah, SEC u daliishaday a “jahwareer ka mid ah ka qaybgalayaasha suuqa” ku salaysan ee dalka Mareykanka sida ay u dabiiciga ah ee alaabta dhaqaale sida sababta loo dhaqaaqo. eryiddu waa sida maanta ee saamaynta, oo socon doona iyada oo loo marayo September 20th.
Report Kraken Daily Market for 09.09.2018
$105M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
CEO CheapAir Jeff Klee: Accept...
Investing - Earning with $10! ...
Wacadka $1 and BECOME A TECHCRA...
iibso, iibiyo, what should be done...
Post Previous:Blockchain News 07.09.2018
Post Next:Blockchain News 11.09.2018
dean ayaa sheegay in:
den ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 22, 2019